Isaia 1: 1-31
Isaia 1 Isaia 2
Mandrenesa, ry lanitra, ary mihainoa, ry tany, Fa Jehovah no miteny hoe: Efa nitaiza sy nahalehibe zaza Aho, Kanjo niodina tamiko ireo.
Ny taninareo dia efa lao; Ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny afo; Ny tany volenareo dia lanin'ny fahavalo* eo imasonareo, ary lao izy toy ny efa noravan'ny fahavalo*.[Heb. hafa firenena]
Ary Ziona zanakavavy dia nilaozana tahaka ny trano rantsan-kazo ao anaty tanim-boaloboka, Sy tahaka ny fandriana mihantona an'ny mpiandry voly ao anaty tanimbolim-boantango*, Dia tahaka ny tanàna atao fahirano.[voantangom-bazaha]
Raha mananty tanana ianareo, Dia hitampi-maso tsy hijery anareo Aho; Eny, na dia manao vavaka be aza ianareo, dia tsy hihaino Aho; Feno ran'olona* ny tananareo.[Heb. rà nalatsaka]
Raha manaiky sy mankatô ianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany;
Dia hamerina ny tanako ho aminao Aho, Ka hodioviko amin'ny lavenona* ianao hahafahan'ny tain-drendrikao, ary hesoriko ny firaka rehetra aminao.[Heb. sirahazo]
Ziona havotana amin'ny fitsarana, ary izay efa mibebaka* ao dia havotana amin'ny fahamarinana;[Heb. miverina]
Fa hahazo henatra ianareo* noho ny amin'ny hazo terebinta izay nifalianareo, ary hangaihay ianareo noho ny amin'ny saha izay natokanareo.[Heb. izy]
Fa ho tahaka ny hazo terebinta malazo ravina ianareo, Sy ho tahaka ny saha tsy misy rano.